Gudoomiyaha Barlamanka Puntland oo dagaal ku qabsaday gobolkaa Sanaag iyo khasaare ka dhashay. – Awdal State Economic and Political Council.
HomeWararka SoomalidaGudoomiyaha Barlamanka Puntland oo dagaal ku qabsaday gobolkaa Sanaag iyo khasaare ka dhashay.
Gudoomiyaha Barlamanka Puntland oo dagaal ku qabsaday gobolkaa Sanaag iyo khasaare ka dhashay.
December 12, 2019 Wararka Soomalida
War Deg Deg Ah:Dagaal Qabsaday Weftigii Gudoomiyaha Barlamaanka Puntland iyo Khasaare xoogan
Wararka laga helayo deegaano ka tirsan gobolka Sanaag ayaa waxaa ay sheegayaan in iska hor imaad uu halkaasi ku dhex-marey dad Shacab ah oo careysan iyo ilaalada guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland Abwaan Cabdi Rashiid Yuusuf Jibriil.
Cabdirashiid Yuusuf Jibriil iyo Wafdigiisa ayaa waxaa ay booqasho ku joogaan Maanta Degmada Badhan ee Gobolka Sanaag iyada oo dadka Gobolkaasina aad uga careysanyihiin xilka qaadistii lagu sameeyay Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Puntland.
Guddoomiyaha degmada Lughaya iyo Suldaan Cismaan Ducaale oo dhagax dhigay mashariic laga hirgelin doono deegaanka Osoli (Video)